खेम सेन्चुरीको पक्षमा बोल्दै पहिलोपटक राजु परियारले भने ,खेमले नबनाएको भए कसरी बन्थ्यो गीत? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
खेम सेन्चुरीको पक्षमा बोल्दै पहिलोपटक राजु परियारले भने ,खेमले नबनाएको भए कसरी बन्थ्यो गीत?
तीजको बेला एउटा गीत सबै तिर निकै चर्चित बन्यो । गीत हो “सोचे झै जिन्दगी रैनछ” । यो गीतलाई धेरैले टिक टक मा नक्कल गरे ।
गीत बाट गायिका मधु क्षेत्री र खेम सेञ्चुरीको चर्चा चुलियो । गीतले कोरोड दर्शक बनायो । पक्कै करोड दर्शक बनाए पछि पैसा पनि कमायो । जो पैसा कमायो अनि लगानी गर्ने र गीत गाउने मधु क्षेत्री र खेम सेञ्चुरी बीच लफडा भएको छ ।
आफू अन्यायमा परेको भन्दै मिडियामा आएकी छन । जब गीतलाई युनिसेफ ले कोरोना बारे सन्देशमुल सूचना बनाउन प्रयोग गर्यो तब त्यहाँ बाट विवाद सुरु भयो । यो सूचनामा सम्झना भण्डारीको आवाज रहेको छ । मधुको आवाज काटेर नसोधी सम्झनालाई राखेको मधुको आरोप छ ।
अहिले खेम पनि मधुको जबाफ दिन मिडियामा आएका छन् । हेरौ सुनौ उनका कुरा पनि ।
मैले गलत बोले भन्दै भाईरल ड्राईभर सुजनले माफी मागे, भाग्य र शिशिरको नाम लिँदा के भयो यस्तो ?
भाईरल ड्रईभर भनेर चिनिएका सुजन बाबु गुरुङ पछिल्ले समय इन्द्रेणीमा गीत गाईसकेपछि झनै चर्चामा छ्
सञ्जीब सिंहको ‘तारेमाम’ सार्वजनिक, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौँ । गायक सञ्जीब सिंहको ‘तारेमाम’ बोलको गीतको भिडियो बाहिरिएको छ । सुदिप सिंहको संगीत
रणवीर र आलिया मिलेर गर्न लागेको नयाँ कामको चौतर्फी चर्चा, के पूरा होला उनीहरुको उदेश्य ?
काठमाडौं – अभिनेता अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर र आलिया भट्टको नयाँ फिल्म ुब्रह्मास्त्रु को यतिबेला
फिल्म ‘कबीर सिंह’ को गीत गाएर चर्चा कमाएका गायक सचेतले परम्परासँग विबाह गर्दै, गरे इन्गेजमेन्ट
काठमाडौं । कोरोना महामारीबीच भारतमा कलाकारहरुले एकपछि अर्को गर्दै विबाह गरिरहेका छन् । चर्चित गायिका